Nivadibadika teny an-tanimbary ireo Sprinter roa nifandona: olona roa maty tsy tra-drano, mpandeha 10 naratra mafy | NewsMada
Par Taratra sur 22/09/2020
Tamin’ny lalana azo lazaina ho mahitsy no nifandona mafy ary nifatratra teny an-tanimbary ny taksiborosy Sprinter iray sy Spinter mpitondra entana, teny Amboniriana, Ambatolampy (RN 7), omaly. Olona roa no maty tsy tra-drano, nosokirina tao anatin’ireo fiara, ankoatra ireo mpandeha 10 naratra mafy.
Izao sahady àry! Tandrevaka sa olana ara-teknika sy/na tsy fahafehezan-dalana! Vao manomboka misokatra ny lalam-pirenena dia efa loza sahady no miseho. Fiara mpitondra entana niainga avy any Ambositra hihazo aty an-drenivohitra ity nifandona tamin’ny taksiborosy iray zotram-paritra mampitohy an’i Behenjy sy Ambatolampy, araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny zandary ao Ambatolampy. Voalazan’ny zandary fa nandeha mafy ilay fiara mpitondra entana io kanefa nivoaka tao anaty fiviliana mampidi-doza hiditra lala-mahitsy. Tsy fantatra anefa izay nahazo ny mpamily fa nikivilavila be mihitsy ny fandehan’ilay fiara nentiny. Tamin’izay indrindra anefa ity fiara ity no nifanena tamin’ilay taksiborosy zotram-paritra. Niezaka niala ity fiara nivilambilam-pandeha ity ny mpamilin’ilay taksiborosy, saingy nokasohan’ilay fiara ny vatany manontolo. Vokany, nipitika tany an-tanimbaary sady nivadibadika teny am-pianjerana ilay taksiborosy notrongisin’ity fiara namoa-doza ity. Ilay fiara mpitondra entana kosa nikorisa nianjera tany amin’ny ilany ankavia tany amin’ny tevana tokony ho 100 metatra vao tafajanona.
Tsy tonga saina ny mpamilin’ilay fiara fitondrana entana…
Olona roa indray maty tsy tra-drano tao amin’ilay fiara taksiborosy, lehilahy 40 taona sy 60 taona raha 10 kosa ny naratra mafy ka voatery nentina haingana namonjy ny hopitalin’Ambatolampy. Tsy nisy naninona kosa ny olona niaraka tamin’ilay fiara fitondrana entana fa ilay mpamily no tsy tonga saina fa toy ireny olona lasa adala ireny ny fahitana azy, araka ny fampitam-baovao voaray hatrany. Ny olona teny amin’ny manodidina ny toerana nitrangan’ny loza no nifanome tanana tamin’ny zandary tamin’ny fandefasana ny razana sy ireo naratra nihazo ny hopitaly. Efa any amin’ny tranom-patin’ny hopitalin’Ambatolampy ny fatin’ireo niharam-boina. Nanamafy kosa ny zandary fa miandry ny fahasitranan’ilay mpamily vao afaka manao ny fanadihadiana sy ny famotorana momba ny nahatonga izao loza namoizana ain’olona izao.
Raha somary nangingina nandritra ny tsy fisokafan’ny lalana noho fiparitahan’ny covid-19 teo aloha izay, izao sahady dia miverina indray ny lozam-pifamoivoizana.